Xa kuthelekiswa nentsimbi eqinileyo efana nentsimbi engqukuva, umbhobho wentsimbi ewulwelo unamandla afanayo aguquguqukayo kunye ne-torsional kunye nobunzima obulula. Yintsimbi yecandelo loqoqosho. Isetyenziswa ngokubanzi ukwenza iinxalenye zesakhiwo kunye namalungu omatshini, afana nombhobho we-oyile, ishafu yokuhambisa imoto, isakhelo sebhayisekile kunye nesikafula sentsimbi esisetyenziswa ekwakheni.
Ukuvelisa iindandatho zentsimbi kunye nemibhobho yentsimbi kunokuphucula ukusetyenziswa kwezinto, ukwenza lula iinkqubo zokuvelisa, kunye nokugcina izixhobo kunye neeyure zokucubungula, ezifana namakhonkco okuthwala, imikhono yeJack, njl.
Umbhobho wentsimbi ongenamthungo wokuthutha ulwelo (GB / t8163-2008) ngumbhobho wentsimbi ongenamthungo osetyenziselwa ukuthutha amanzi, i-oyile, igesi kunye nolunye ulwelo. Ifomula yobunzima bombhobho wentsimbi yolwelo: [(ubukhulu bodonga lwangaphandle) * ubukhulu bodonga] * 0.02466 = kg / M (ubunzima ngemitha nganye) ikakhulu ivelisa amabanga amele umbhobho wentsimbi 10#, 20#, Q345
Ixesha lokuposa: Aug-25-2021